Ny fitsipiky ny fanamainana afovoanydia ny lovia rotary centrifugal mihodina amin'ny hafainganam-pandeha ambanin'ny fihetsiky ny motera, ary ny rano dia atsipy mafy amin'ny lozisin'ny atôma, ary ny rano fantsom-batana dia atômôna ho 5-10 microns an'ny singa ultrafine ary avy eo dia esorina. Rehefa avy nitsoka ny rivotra dia nifanakalo hafanana sy hamandoana ny vongan-drivotra sy rano, hahatratrarana ny tanjon'ny hamandoana sy ny fampangatsiahana tanteraka ny rivotra.
Fitsipika miasa amin'ny hamandoana afovoany ：
Ny fanamainana mandrehitra sentrifugal dia azo ahantona, mihantona amin'ny rindrina, perforation mihantona amin'ny rindrina ary fametrahana hafa tsy misy antony, aza hipetraka amin'ny sehatry ny asa, azo antoka sy azo antoka, fiainana lehibe.
Endri-javatra ny fanamainana afovoany：
1. Ireo poti-jet dia esorina ao anaty sombin-javatra ultrafine (5-10 microns), izay tsy hamokatra faritra mando rano.
2. Ny mari-pana dia mety ho 6-8 ° C, ny rivotra sy ny hamandoana dia azo fidina tsirairay avy.
3. Mety indrindra amin'ny hamandoana mivantana ny hamandoana (> 60% RH).
4. Fanaraha-maso ny hamandoana mandeha ho azy.
Fanamainana hafanana tranga azo ampiharina:
Noho ny hamandoany lehibe sy ny fanjifana herinaratra ambany dia ampiasaina amin'ny fotoana hamandoana lehibe izany.
Indostria: mety amin'ny lamba, pirinty, fanodinana akanjo, fanodinana hazo, ozinina vy, ozinina vita amin'ny seramika, efitrano fanaovan-doko sy atrikasa famokarana indostrialy hafa misy fepetra takon'ny hamandoana avo (60% RH), indrindra mety amin'ny tontolon'ny indostria sy ny fitrandrahana harena misy loharano mafana sarotra ny hamandoana.Fambolena: fotoana fampiasana sns.
Fomba fampisehoana ny fanamainana afovoany:
Io no masontsivana ilaina indrindra amin'ny hamandoana, orinasa sasany hihaonana amin'ny fikatsahan'ny mpanjifa ny psikolojia ny hamandoana, hanamarika ny hamandoana, noho izany ny fenitra dia mamaritra mazava tsara fa ny habetsahan'ny hamandoana dia tsy tokony ho ambany noho ny sandan'ny nomen'ny isa hamandoana.
Manondro ny tahan'ny tahan'ny hamandoana ary ny herin'ny fidiran'ny hamando, izay taratry ny habetsahan'ny hamandoana azo vokarina isaky ny fanjifana herinaratra, ary index lehibe handrefesana ny fahombiazan'ny hamandoana. Mba hitarihana ny mpanjifa hividy vokatra mitahiry angovo sy tia tontolo iainana ary mandrisika ireo orinasa hamokatra vokatra mahomby kokoa, ny fenitra dia mizara ny index ho kilasy efatra: A, B, C ary D.
Raha heverina fa ny hamandoana dia azo ampiasaina ao amin'ny efitrano fandriana, raha toa ka be loatra ny tabataba dia hisy fiatraikany amin'ny mpanjifa izany, ka ny fenitra dia misy fetra henjana amin'ny index index.
Ny ain'ny serivisy an'ny
4.Evaporation fototra (fitaovana) fiainana fanompoana:
Ho an'ny fanalefahana etona mivantana, ny fotony evaporator (fitaovana) no singa manan-danja indrindra amin'ny fampisehoana. Miaraka amin'ny fampiasana tsy tapaka ny hamandoana, ny fahombiazan'ny vovo-drivotra (fitaovana) dia hitohy hihena ary ny hamandoana koa hitohy hihena. Araka ny fenitra, rehefa mihena hatramin'ny 50% ny haavon'ny hamandoana vao manomboka ny volony dia heverina ho tsy fahombiazan'ny fototr'izany. Ho an'ny fotony (fitaovana) azo ovaina azo ovaina, ny androm-piainany dia tsy tokony ho latsaky ny 1000 ora.
5. endri-javatra hafa:
Humidifier miaraka amin'ny rano manalefaka, fampisehoana hamandoana ary asa hafa:
Mba hisorohana ny vokatra sasany dia mazava fa tsy manana an'io asa io, na io asany io dia tsy afaka mitarika ny vokany mifanaraka amin'izany, ary amin'ny alàlan'ny fanaovana dokambarotra diso mba hamitahana ny mpanjifa, ny fenitra dia nametraka ihany koa ny fepetra takiana mazava ho an'ireo asa fanampiana ireo: ho an'ny fanamainana rano , ny fenitra dia mamaritra aorian'ny fanalefahana ny fanalefahana rano, ny hamafin'ny rano dia tsy tokony hihoatra ny 100mg / L. Alohan'ny tsy fahombiazan'ny fanamainana rano dia tsy tokony ho latsaky ny 100L ny totalin'ny rano nanalefaka. Ho an'ny fampisehoana hamandoana, ny fepetra ao amin'ny hamandoana dia 30% ~ 70% amin'ny elanelam-potoana, ny lesoka fampisehoana hamandoana dia tokony ho ao anatin'ny ± 10%, mba tsy hadisoana dia lehibe loatra fa mba hamitahana ny mpanjifa. Ho fanampin'izany, ny fenitra ihany koa dia mamaritra fa satria ny haavon'ny rano dia hisy fiatraikany miharihary amin'ny fahombiazan'ny sasany hamandoana, ny hamandoana dia tokony hanana asa fiarovana ny haavon'ny rano hisorohana ny mpanjifa tsy ho tonga saina amin'ny fanaovana ny hamandoana amin'ny toerana tsy dia misy vokany ary ambany ny fahombiazany. mandritra ny fotoana ela.